Kulesi sihloko sizophakamisa isihloko sokungazethembi owesifazane kumuntu. Kuyini ukuthembela jikelele? Futhi kungani ukungazethembi kuvela? Ake sihlathulule amaqiniso athakazelisayo mayelana nokuthi kungani kukhona ukungathembeki nokuthi uvela kuphi.
Ukungazethembi kwamathambo kuthatha kuphi?
Kusukela ebuntwaneni. Izazi zengqondo zivame ukukholelwa ukuthi ukungabi nethando ebuntwaneni, kanye nokuhlangenwe nakho okungalungile komama, kungabangela ukungaqiniseki futhi ngenxa yalokho, ukungathembeki emadodeni
Okuhlangenwe nakho okwedlule okungaphumelelanga.
Ukukhathazeka okwandisa ngekusasa.
Ngeke sixoxe ngesihloko sokungathembeki okuhle noma okubi. Ngokuqinisekile ukungathembeki kuthatha isinyathelo ngokulimaza kowesifazane! Uma ukungathembeki kuqala kuqala ukuhluma engqondweni nasemphefumulweni wakho, kuzomele uzame ukukuqeda. Futhi uma isizathu siwukuthi? Ngisho noma ukungazethembi akusizi ngalutho, akufanele kusinike impande ejulile emphefumulweni wakho. Iqiniso liwukuthi ukungathembeki komuntu akukwazi ukubonakala kuwe kuzo zonke izici zokuphila kwakho. Futhi uzoqala ukubonisa ukungakholelwa ebuhlotsheni emsebenzini, nabangani, nezingane kanye nokuphila ngokwayo.
Ukuthembela yikhono lomuntu ukugcina inhliziyo yakhe ivulekile! Futhi ukwethemba yisisekelo sabo bonke ubudlelwane. Lokhu akusho nje ukuthi yini okudingayo ukukholelwa abanye, kodwa isifiso sokugcina inhliziyo ivulekele impilo kanye nabanye kuzo zonke izimo. Lokhu kunzima kakhulu!
Ekuphileni komuntu siqu, ukwethemba kuyisihluthulelo sokuphumelela nenjabulo!
Ososayensi bathole isizathu sokungathembeki kwabesifazane?
Izibalo zithi abesifazane banamathuba amaningi okungazethembi amadoda kunamadoda kwabesifazane. Futhi-ke, umkhuba wesintu ukusesha kukho konke ukuchaza kwesayensi awuzange uhluleke.
Ososayensi baseDashi banquma ukuchaza ukuthi kungani lokhu kwenzeka. Esikhathini sokuhlola, ososayensi bafika esiphethweni sokuthi ukungathembeki emadodeni kuhlobene ngokuqondile nesilinganiso se-testosterone yesifazane, i-hormone yesilisa emzimbeni. Inani elikhudlwana lale nsimbi lizokwenza ukuthi abantu bangathembi. Lokhu kungenxa yokuthi i-testosterone, ngenkathi ikhuphuka, ivimbela i-hormone yenjabulo ye-oktotocin emzimbeni wabesifazane, okuyinto eyanciphisa izinga lokuzethemba kulabo abakhiqizi.
Indlela yokufunda ukuthembela ebuhlotsheni?
Isinyathelo sokuqala esibaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi kunenkinga enjalo. Ungahlola kanjani? Phawula indlela osabela ngayo lapho uboya izinwele ezigqoke izingubo noma ama-sequin esikhwameni sakho ozithandayo? Uma umqondo wokuqala we-obizmeni, sekuvele kudingekile ukushaya i-alamu.
Indlela ephumelela kakhulu ukukwenza ukuhlola kwakho futhi, ekugcineni, uqale ukuzithanda ngokwangempela. Phakamisa indlela yokwanela. Kuwumsebenzi onzima nokusebenza kanzima othandweni ngokwakho, kunokuba udonsa amandla okubaluleka okusola nokungahambi kahle.
Thatha ubunikazi ngokuziphatha. Udinga ukuyeka ukulawula! Izingcingo ezingapheli kumyeni wakhe, ukufunda i-imeyili, i-SMS, njll. Kudingekile ukuthi usungulwe ukuthi indoda ayilona impahla yakho, kodwa umuntu ohlukile onesifiso nemithetho yakhe, futhi, ngokungavamile, amalungelo. Ukulawula ngeke kube yisihluthulelo sokuthembeka.
Amandla aqondiswe ukwakha isimo esihlelekile endlini, ukwakha ukuxhumana kwengqondo nomuntu kanye nokuheha kwakhe. Into yokuthi lapho kuphakama lezi zinsimbi, lezi zinto zithinteka ngokushesha.
Isiphetho esiphelele. Uma umgomo wakho ukugcina ubudlelwane, khona-ke udinga ukuziqaphela, wenze izinto ozithandayo, uthuthukise izici ezithakazelisayo zokuphila, ngokujwayelekile, nganoma yiziphi izindlela, ziphakamise ukuzethemba kwakho.
Ungayihlola kanjani ngokufanele?
Uma izinsolo zakho akuzona ukuphoqa, kodwa isimo esihlale siphindaphinda. Ngempela, kuvame ukuba yiqiniso ukuthi izinsolo azikho lutho. Ngokuvamile uthembela indoda, kodwa kunezizathu zokungathembeli.
Okokuqala, udinga ukuqala ngokushesha izinyathelo ezichazwe ngenhla. Bese uhlola uma ukwesaba kwakho kungenasisekelo. Ungahlola kanjani? Okokuqala, unqume ngokucacile-ingabe ufuna ngempela ukuhlola nokuthi uzokwenzenjani ngemva kwalokho? Noma yimuphi owesifazane owanele angasho ukuthi kufanele yini ukusho noma ukuthembela kumuntu kulokhu noma leso simo ngaphandle kokuhlola. Kodwa uma wanquma ukuyihlola ke unga:
Vele uhlole ngokuthula, usebenzisa usizo lomsunguli. Kulesi simo, kulungile.
Ngokwethembeka ukukhuluma nendoda. Lesi sinyathelo sabantu besifazane abanesibindi nabanelisekile. Futhi uma phakathi kwakho nomuntu wakho ubuhlobo obuhle obungokomoya, lokhu kuzothola kuphela. Kodwa le ndlela ayijwayelekile kakhulu.
Kunezindlela zamanje zamakhemikhali zokuhlola.
Izindlela zanamuhla ezisetshenziswa kakhulu ezweni eliphucukile
Ekuqaleni kwekhulu leminyaka lama-21, abantu babesaba kakhulu kakhulu. Akusikho okungafani-nokuhlaselwa okuvivinywa!
Isibonelo, eJapane, abesifazane benqaba ukuhlazisa i-lipstick checks kuma-collars abo futhi bafuna abanye abantu abakha iphunga. Ukulawula abayeni baqala ukusebenzisa i-nebulizer, esekelwe kumakhemikhali, esetshenziselwa ukuhlolwa kwemithi. Isebenza njengephepha le-litmus. Uma uphonswa ku-izingubo, umkhondo wezinguquko ube luhlaza okwesibhakabhaka.
Ukuthengiswa kwalezi zimali kuqhubeka eJapane ngokuhlakanipha! Kuyafaneleka kakhulu - ama-dollar angu-280. Futhi izibalo ziyadumaza: abathengi abakhulu bangabesifazane. Izindlela ezifanayo zivamile eNgilandi. Ukuthandwa kwabo kukhula kuphela.
Isiphetho. Thembela noma ungathembi, hlola noma ungaboni - kungcono kuwe. Kodwa isiphetho esibaluleke kunazo zonke yilezi: Uma uthanda ngempela umuntu wakho futhi usebuhlobo obunzima, khona-ke udinga ukumethemba. Kuyathemba ukuthi kuyisiqinisekiso senjabulo nokuvumelana emphefumulweni wesifazane. Uma uthando lwangempela, awudingi ukufuna izizathu zokuvuma.
Indlela yokunqoba ukwesaba ushintsho?
Ukwesaba, ukulahlekelwa amandla
Yeka ukuthi ungayiphuli kanjani ubuhlobo bokucindezeleka ngokweqile
Indlela yokuqeda kahle ubuhlobo kude?
Ukwelashwa kwe-Keratin kwezinwele
Amaphesenti omshado obuhlakaniphile, noma indlela yokukhetha ingubo yomshado
Indlela yokukhetha ibhosi abesifazane abakhulelwe
Imikhiqizo yokunakekelwa komlomo
Ama-blondes ahloniphekile nama-sexy e-Hollywood
I-puff pastry nenkukhu namakhowe
Ubuhle-amashaveli kaNovemba esikhwameni sokunakekelwa kwezinyawo
Ungondla kanjani umuntu ogulayo?
Skewers of ingulube nge lemon